Transdermal ijeli "Divigel", ukubuyekezwa zazo baningi kakhulu, kuba izidakamizwa protivoklimaktericheskim zokwenziwa engabelwe izimpawu ka-acute estrogen ukuntula. Ngokwesimo sawo kuyindlela yokwelapha kwama-hormone, njengoba imfuyo yayo asebenzayo - zokwenziwa estradiol - ngokuya zamakhemikhali nezinto eziphilayo ezifanayo ngokuphelele zemvelo hormone ocansini nowesifazane.
Umuthi 'Divigel ", ukubuyekezwa zazo bangamaRoma omuhle, kuyinto kuyaphumelela eside noma ukwelashwa cyclical abesifazane esikhathini postmenstrual. Ngenxa uketshezi singenele estrogen balomkhakha kukhona dysfunctions ezihlukahlukene umzimba, ebonakaliswa unenkinga, vasomotor kokuntengantenga kwezomnotho, yoma okuqhubekayo ohlelweni urogenital, futhi ngokuvamile emgogodleni osteoporotic. Ukuba nomthelela kakhulu efana isenzo le-hormone zemvelo, futhi zikhuthaza ukuthuthukiswa sangasese, amashubhu fallopian kanye kwesibeletho ukulungiselela "Divigel" (izilinganiso siliqinisekise) aqede ngokuphelele noma kakhulu kunciphisa le symptomatology.
Pharmacodynamics we ijeli kanje. Ngo amaseli ehlosiwe izidakamizwa "Divigel" zokwenziwa estradiol engena isibopho ikhemikhali receptor ethize, ukwakha nabo yokwamukela-ligand eziyinkimbinkimbi nokusebenzisana izingxenye estrageneffektornymi ufuzo, kanye ngokukhethekile amaprotheni intracellular. Lokhu kubangela lokungeniswa we synthesis mRNA nokudedela cytokines ahlukahlukene.
Ngakho, transdermal kusho "Divigel" ukhuthaza ukwenqatshwa esifike ngesikhathi futhi njalo endometrium ukuhlanzwa ukopha. A lokuhlushwa enkulu izidakamizwa ingase ithuthukise Hyperplasia endometrial, ukucindezelwa of lactation, okusithiyayo of resorption ithambo izicubu, ukuze ashukumise synthesis ezithile amaprotheni ezokuthutha (thyroxine ngibopha globulin transcortin, transferrin).
Isicelo sangaphandle kusho "Divigel" (uyakufakazela lokhu impendulo) has cishe awekho side effect ezifana blood pressure. Lo is impela a inzuzo enkulu uma ziqhathaniswa ahlukahlukene estradiolsoderzhaschimi imithi ngomlomo.
Esebenzisa transdermal isimiso sokuqondisa 'Divigel "IVF inikezwa lapho kuyadingeka wokuqhubeka ledzingekako estradiol. Imithamo kakhulu ngabanye kanye zinqunywa Ochwepheshe umtholampilo lapho inqubo selenziwe. izifundo zokwelapha "Divigel" izidakamizwa kunqunywa uhlobo ukuhambisana yayo kanye nokuxhumana nezinye izidakamizwa. Ngakho, yabe seyaziwa ukuthi isithako yayo asebenzayo kungehlisa ukusebenza kwe antihypertensive, imithi antidiabetic futhi anticoagulants. ukuphatha ngesikhathi esisodwa amanxusa kanye amalungiselelo equkethe inductors kanye enzyme isibindi (barbiturates, "Carbamazepine" "Griseofulvin" "rifampicin", njll) kungadala ukwehla estradiol e-plasma.
Inqubo ukwelashwa "Divigel" izidakamizwa, okuyinto intengo ngempela ngokulinganisela, kufanele kuhambisane survey njalo. Imvamisa futhi ichaza iqoqo izindlela udokotela kuye ngomuntu izidingo zokwelashwa isiguli ngasinye. Kodwa njengoba umthetho, aqokwe mammography ezimweni eziningi.
Njengoba imfundo ukulungiselela "Divigel" enezinto eziningi Izimo. Ikakhulukazi, kwatholakala ukuthi unesifo noma okusolwa Oncology mammary isimila kumiswa umthondo (lesizalo fibroids, umdlavuza wesibeletho, ngemomozi, amaqanda, njll), Hyperplasia Endometrial, izifo ngokukhukhumala kwentamo kwezicubu zezinzwa, giperestrogeniey isigaba climacteric, thrombophlebitis, izimila isibindi futhi pituitary ukwephulwa unhlangothi, isifo sikashukela kanye nezinye izifo. Ngakho-ke, ithuluzi kufanele kuthathwe kuphela kadokotela futhi ngaphansi ngokuqinile ecacisiwe imithamo yabo.
"Lotseril" (nail sula): izibuyekezo luhlobo
"Vita-POS": yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Incazelo yomkhiqizo "Nucleo CMF Forte". Izinkomba ukusetshenziswa futhi impendulo
Umuthi 'Atenolol ". Izinkomba ukusetshenziswa, side effects
Amakhathuni Ovusa for girls iminyaka 11-12
Kungani amantombazane ukugoqa imilenze yabo uma ime? izimbangela ezingokwengqondo bendabuko
Izinkinga ukucinana kwemigudu yokuphefumula: Izimbangela Nemiphumela